Oru ise kachasi nma ma oburu na igbanwe nti | Prolapse? Zere mmega ndị a
Mmega ahụ kachasị ise ma ọ bụrụ na ị na-eme prolapse
03 / 10 / 2016 /0 Comments/i quality Articles, Mmega Ahụ na Mmega Ahụ, Azu, ike omume, ọzụzụ/av ewute
Pro nwere prolapse? Mgbe ahụ gbaara ihe omume ndị a! Ndị a nwere ike ime ka ihe mgbu belata ma duga na ọgwụgwọ na-akawanye njọ. Na-eche free ịkọrọ onye metụtara prolapse. Have nwere aro ọ bụla maka mmega ahụ nwere ike ibutere gị azụ? Gwa m na ngalaba ihe na ala nke edemede ma ọ bụ Facebook.
Mmega ahụ na mmegharị na-adịkarị mma - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa diski - dịka ike gị si dị, n'ezie. Ma enwere mmega ahụ na mmega ahụ nwere ike ime ka mgbaàmà mgbapụta, akwara mgbu na mgbu mgbu dịkwuo njọ - ọkachasị ndị na-enye mgbali afọ ma ọ bụ nrụgide dị na diski ahụ. Lee usoro omume 5 ị kwesịrị izere ma ọ bụrụ na ị nwere diski. N'ezie, enwere ọtụtụ mmega ahụ nwere ike ịbụ mmega ahụ adịghị mma, mana ebe a anyị ahọrọla mpempe ise. Anyị na-arụtụ aka na ọ bụ mmebi iwu na-ezighi ezi anyị na-elekwasị anya na isiokwu a - yana na nke a bụ nhọrọ nke mmega ahụ nke ọtụtụ na-emehie ihe n'emeghị ka akwara ọzụzụ zuru oke.
1. presskwụ pịa
Pressgba ụkwụ ụkwụ bụ mmega ahụ nwere ike isi ike ịrụ n'ụzọ ziri ezi - ọtụtụ mmadụ na-adọpụkwa ụkwụ ha nke ọma tupu ịkwanye. Nke a nwere ike ime ka ihe ahụ dịpụrụ adịpụ na diski intervertebral gị dị ala ma mepụta nnukwu nrụgide megide diski - nke nwere ike ibute mbibi na-abawanye na diski ahụ, nke nwere ike ibute ihe mgbu na mgbaàmà na-akawanye njọ.
A: Nhazi ezighi ezi. You na-ahụ ka azụ na-ehulata mgbe ị na-aga ije na-abanye ụkwụ gị ụkwụ? Nke a bụ ihe nwere ike iduga nnukwu nsogbu diski. Kama nke ahụ, kwụsịtụ dị ka e gosiri na foto na-esonụ (B).
B: Igbu egbu nke oma. Ejila ikpere gị were 90 digit.
Igwe disks intervertebral bụ azụ azụ. Mgbe ị na-agba ọsọ, karịsịa na ebe siri ike, nke a nwere ike ibute nnukwu ibu na diski ala na azụ - nke nwere ike ịkpasu mgbu ahụ. Ya mere, ọ ga-aka mma ije ije na ala siri ike ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu diski mara - opekata mpe ruo mgbe ị wulitere mọzụlụ, akwara ike na ikpere na hip, wee laghachi ọrụ ka mma mgbe mmerụ ahụ gasịrị. Ozugbo mmerụ ahụ gwọọ, ị nwere ike jiri nwayọ tinye sọọsọ / ịgba ọsọ na usoro mmega ahụ gị ọzọ.
3. Nọdụ ala-enweghị nkwado na ịgbagọ
Anyị na-akwado ka ị kwado ala gị iji mebie ihe mgbochi ma ọ bụ bọọlụ mmega ma ọ bụrụ na ị ga-anọdụ ala. Ofdị ịnọdụ ala ebe a na-eweli ozu ya elu n'otu oge ahụ ka ọ na-atụgharị ya kwesịrị izere ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu diski mara. Enwere ụzọ ndị ọzọ dị mma maka ọzụzụ dị nwayọ nke afọ na akwara isi - dị ka mgbatị mgbatị afọ-obere ike plank og Kkaka.
4. "Onye na -ekewa osisi" nwere bọọlụ ọgwụ ma ọ bụ ibu efu
Omume a na-abanye n'ọnọdụ siri ike na nke gbagọrọ agbagọ - ikekwe nke a bụ ụdị ọnọdụ ị nwere mgbe mbụ ị kpasuru ọgba aghara diski gị? Anyị na-atụ aro ka ị ghara ime mmega ahụ na-ehulata, ntụgharị ma na-ebuwanye ibu n'ụdị bọọlụ ma ọ bụ ibu ibu. Ọ bụrụ na ịnweghị diski intervertebral nke nwere ike iguzogide karịa anyị 'ndị nkịtị n'okporo ámá'. Ee, mmega ahụ yiri nke a nwere ike ịrụ ọrụ nwa oge, mana oge na-aga, ụdị nsogbu a nwere ike ibute mmerụ diski na mgbu ka njọ.
5. Gaa n'ihu gbagọrọ agbagọ na ogologo ụkwụ
Mgbatị a nwere ike ịdị ka ọ 'na-elekọta azụ gị nke ọma', Mana eziokwu bụ na ọ bụrụ na emeghị ya ezighi ezi, ọ na-etinye nrụgide dị elu na diski ala na obere ala gị. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere physics, ị ga - ahụ etu ikike ga - esi gafere akụkụ ndị dị ala n’azụ tupu ị gbagoo n’iru ala. Ya mere, ọ dị mkpa ịnwale itinye mgbatị na-anọpụ iche na azụ mgbe ị na-eme mgbatị ahụ.
A: Egbu na-ezighi ezi. Site na ịgbada azụ, pelvis ga-aga azụ, ị ga-enweta nrụgide dị ukwuu na diski nke obere azụ.
B: Egbu egbu kwesịrị ekwesị. Ọkpụkpụ azụ na azụ pelvic ọnọdụ na-eme ka nke a bụrụ ezigbo ezigbo.
Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na YouTube ma ọ bụ Facebook ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya gbasara mmega ahụ ma ọ bụ nsogbu ahụ ike gị na nkwonkwo gị. Kpọtụrụ onye na-agwọ ọrịa gị (chiropractor, physiotherapist or doctor) ma ọ bụrụ na ha echee na oge eruola ka ị malite site na omume ụfọdụ na omume ndị ha na-akwado gị.
Anyị na-atụ aro ka ị nwaa mgbatị ndị a na-egosi obere mgbali afọ-dabere na ihe ọmụma ọzụzụ Stuart McGill:
Nke: Mee mgbatị ahụ intra-abdominal nye gị maka prolapse
Kedu ihe m ga - eme ọbụlagodi akwara na mgbu nkwonkwo?
1. A na-atụ aro mmega zuru oke, mmega ahụ a kapịrị ọnụ, ịgbatị na ọrụ, mana nọrọ na njedebe mgbu. Abụọ na-aga ije n'ime ụbọchị nke nkeji iri abụọ ruo iri abụọ na asaa asaa na-eme ka ahụ dị mma na uru ahụ.
2. Bọọlụ na - eme anyị na-akwado ike - ha na-abịa nha dịgasị iche iche ka ị nwee ike kụrụ nke ọma ọbụlagodi akụkụ ahụ niile. O nweghi ezigbo aka karịa nke a! Anyị na-akwado ihe ndị a (pịa ihe oyiyi dị n'okpuru) - nke bụ ihe zuru oke nke 5 trigge point / bọọlụ ịhịa aka dị iche iche nha:
3. ọzụzụ: Ọzụzụ a kapịrị ọnụ na usoro ọzụzụ dị iche iche nke ndị mmegide (dị ka ihe a zuru oke nke 6, nke na-emegide ihe di iche) nwere ike inyere gị aka ịzụ ume na ịrụ ọrụ. Ọzụzụ knit na-abụkarị ọzụzụ a kapịrị ọnụ karị, nke n'aka nke ya nwere ike iduga mgbochi mmerụ ahụ na mbelata mgbu.
4. Enyemaka Mgbu - Ntinye: Ihe nraghachi azụ bụ ngwaahịa sitere n'okike nke nwere ike belata ihe mgbu site na iji nwayọ kwoo mpaghara ahụ. A na-atụ aro ịkpụzi oyi mgbe mgbu ahụ na-adị oke ike. Mgbe ha kwusiri ike, a na-atụ aro ọgwụgwọ ọkụ - ya mere ọ ga-adị mma ka ịnwe ma okpomoku ma ọkụ.
5. Enyemaka Mgbu - Ahụhụ: Ming na-eme ka uru ahụ sie ike nwere ike ime ka ọbara na-ekesa ma belata ihe mgbu. Anyị na-akwado ndị a reusable gas / oyi ikuku (pịa ebe a iji gụkwuo banyere ya) - enwere ike iji ya maka izu ike (enwere ike ịjụ oyi) yana maka ikpo ọkụ (enwere ike iwe ọkụ na microwave).
Na-atụ aro ngwaahịa maka mgbu mgbu maka akwara na nkwonkwo mgbu
Ihe nraghachi azụ (Cold / cryotherapy)
Peeji ọzọ: - Azụ? I kwesiri ima ihe a!
Ọzọkwa gụ: - AU! O bu Mbubre Mbubreyo ma obu Nmechu Anya?
Isiokwu a ma ama: - Ọgwụ Alzheimer ọhụrụ weghachite ọrụ ebe nchekwa zuru oke!
- want chọrọ ịmatakwu ma ọ bụ nwee ajụjụ? Jụọ ndị ọrụ nlekọta ahụike ruru eru na-akwụ ụgwọ ozugbo (na-akwụghị ụgwọ) site n'aka anyị Facebook Page ma ọ bụ site “AJ --J G - Zaa azịza!"-Spalte.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Benpress.jpg?media=1648573622 466 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-10-03 19:20:182018-04-03 10:42:08Mmega ahụ kachasị ise ma ọ bụrụ na ị na-eme prolapse
Mgbatị maka azụ mgbu Berg na Dalbane nwere ike wepu Nyrestein